China X6 purple Ukukhiqiza futhi Factory | Ubuchwepheshe Bezokwelapha Obusekelwe Ebufakazini
I-thermometer yabantu abadala, i-Digital Non-Contact Forehead Thermometer engafundile ngeFahrenheit Ukufundela Ingane Nabadala
Isilinganiso Esingaxhumani Naso: Ukugwema ukuthintana ngqo nesikhumba kwenza inqubo yokulinganisa iphephe futhi ibe nempilo, futhi ibanga le-5-8cm lingavimbela ukutheleleka okuwelile, i-thermometer yebunzi engathinti umuntu omdala.
Ukufundwa kwe-Fahrenheit Kuyatholakala: Ungakhetha ukukala usebenzisa i-Fahrenheit noma i-Celsius. Futhi ungasebenzisa le thermometer ukukala izinga lokushisa lomzimba womuntu noma izinto ezahlukahlukene njengobisi, amanzi noma igumbi.
Ukufundwa Okusheshayo Okunembile: Thola ukufundwa okunembile ngokushesha kungakapheli umzuzwana owodwa futhi umphumela wokulinganisa ukhombisa ngempela ukushisa komzimba womuntu. Ngaphandle kokusebenza, izocima ngokuzenzakalela ngemuva kwemizuzwana engama-20, edlala indima yokusebenzisa amandla amancane.
Idizayini Elula: Sula izinkinobho zokubonisa nezokusebenza zenza i-thermometer isebenziseke kalula. Isibonisi sangemuva silungele ukusetshenziswa kobusuku nesilinganiso sokushisa. Ngesibambo esinethezekile futhi senziwe ngosayizi omncane, ungayithatha yonke indawo.
I-Thermometer ethembekile: Imibala emithathu yokubonisa okushisa okubomvu okusawolintshi oluhlaza okotshani, uma unemfiva noma izinga lokushisa eliphakeme, kuzoba ne-beeper esheshayo ye-thermometer ye-infrared. Cindezela "Imodi" ukuze ushintshe kusuka kusilinganiso sebunzi lomuntu uye kusilinganiso se-Object.
Langaphambilini X6 mpunga
Olandelayo: Isibhamu sokushisa esiphambili X5